Nhau - Nzira Nhanhatu dzeKuwedzera Yekushandisa Hupenyu
Nzira Nhanhatu dzeKuwedzera Yekushandisa Hupenyu
Hupenyu hwekushandisa hwave chinhu chakakosha kukanganisa kubatsirwa kwejekiseni muforoma. Kana nzira dzinonzwisisika dzikashandiswa kugadzira hupenyu hweforoma kupfuura hunodikanwa dhizaini, ipapo purofiti yekambani ichavandudzwa zvikuru. Hedzino dzimwe nzira dzekuvandudza hupenyu hweforoma.
1. Zvakarongeka kumisikidza chakuvhuvhu nokukiya simba
Izvo zvakakosha kwazvo kuseta iyo yekukiya simba nenzira chaiyo kune yega furu. Kana munhu anoshandisa akanyanya kukiya simba, jekiseni rinomanikidza rinogona kudarika simba rekuvharisa chakuvhuvhu uye nekuvhuvhura vhuvhu panguva yejekiseni. Kana anoshanda akashandisa zvakanyanya kukiya simba, jekiseni kuumbwa muchina unozoshandisa zvakanyanya kudzvanyirira pamatanho ekuparadzanisa, nzvimbo dzekubuda uye zvinhu zveforoma, nokudaro zvichikuvadza chishandiso.
Kuti udzivise aya mamiriro,
2. Kumisikidza yakaderera kumanikidza padhuze.
Kugadzira yakaderera-kumanikidza padhuze pane yekudhinda kuchengetedza chakuvhuvhu. Gadza iyo yepamusoro-yekumanikidza yekukiya chinzvimbo kuenda ku0.05 yakakwira kupfuura iyo chaiyo mold kuonana nzvimbo. Zvishoma nezvishoma dzikisa yakaderera kumanikidza yekuvhara kumanikidza kusvikira iyo mold isina kukiyiwa. Panguva ino, kumanikidza kunokwira zvishoma nezvishoma, zvichibvumira yakaringana kumanikidza kuti furuu ishanduke kubva pasi-kumanikidza kuenda kumusoro-kumanikidza kukiya kumusoro.
Chii chimwezve, seta iyo mold padyo nguva kusvika ku5 secs yakakwira kupfuura iyo chaiyo mold yekuvhara nguva inodikanwa. Semuenzaniso, kana iyo chaiyo mold yekuvhara nguva iri 0.85 masekondi, isa iyo yekuvhara nguva yekuvhara kusvika 1.35 masekondi.
3. Zvakarongeka kumisikidza chakuvhe kuvhura nekuvhara
Clamp kumhanya kunokanganisa kutenderera nguva, asi kumhanyisa kumhanya hakusi nani, nekuti zvinogona kukonzera chishandiso kupfeka kana kukuvara. Inofanira kuona kuti shanduko kubva padhuze nekukurumidza kusvika padiki inononoka uye mamiriro ekunze anoitika mapini nezvikamu zvisati zvabatana. Ita shuwa kuti shanduko pakati peforoma yakatsemuka uye chakuvhurika yakavhurika nekukurumidza iri zvakare mushe, nechikamu chakashama chakashama chinoitika mushure mekuti zvese zvinhu zvabuda muforoma.
4. Zvakakodzera kumisikidza ejection
Mapoinzi ekumisikidza asina kukodzera anogona kupfupisa chishandiso hupenyu nekuda kwekurohwa zvakanyanya kana kukanganiswa kwechikamu chisina kukodzera, zvichikonzera kuvharwa kwechikamu pakati pehafu dzevhu. Izvo zvinodikanwa kuburitsa zvikamu kubva muforoma nenzira kwayo zvinoenderana neyekuparadzanisa huwandu hunodiwa nechigadzirwa chaicho. Kuwedzeredzwa kwakanyanya kuchave nekumanikidza kwakanyanya pane ejector pini. Pamusoro peiyo jekiseni vhoriyamu, jekiseni kumanikidzwa hakufanirwe kuiswa kwakanyanya, chengetedza kumanikidza seti mapoinzi ingoshandisa chete inodiwa huwandu.
5. Zvakakodzera kuisa mold kudiridza
Tembiricha yemuvhu yakanyanyisa kukwirira uye ichave nehunhu husina kunaka pahupenyu hweforoma, saka tembiricha tembiricha muganho kune chidiki chinodiwa chechikamu chinogamuchirwa aesthetics. Zvakare, ita shuwa kuti mutsauko wetembiricha pakati pechinhu chinofamba chishandiso uye chakamisikidzwa chishandiso divi haipfuure 6 ° C. Yakakwirira pamusoro peichi chiyero inotungamira kune mutsauko wekupisa kwekushomeka pakati pemativi maviri eforoma, zvichikonzera dambudziko rekuvhurwa nekuvharwa kweforoma haina kutsetseka, uye kusakara kana kukuvara kweforoma.
6. Mould kuchenesa uye kugadzira
Munzvimbo yekugadzira, gara uchitarisa, chenesa uye wozora mafurui mashoma kamwe pasichifu. Munguva yekuita, tarisa zviratidzo zvekusakara, senge kukwenya, kupatsanura mutsetse kupfeka, burr nesimbi machipisi.
Gadzira chirongwa chenguva dzose chekuchengetedza, chengetedza marekodhi ekugadzirisa muforoma uye wongorora zviitiko zvekuchengetedza zvekumisikidza dziviriro yekuchengetedza nguva, izvo zvinobatsira kudzora zviitiko zvisina kurongwa zvekuchengetedza. Tarisa uone kana masiraidhi akatsvedza uye kuti masiraidhi ari kushanda zvakajairika. Teerera kune zviratidzo zvekusaziva kutadza uye yakasununguka magibhi.
Iva nechokwadi chekuti slide iri munzvimbo yakarurama paunobuda muforoma mushure mekuchenesa nekuongorora. Kana chakuvhuvhu chisingakwanise kushandiswa kweanopfuura maawa matanhatu, ndapota shandisa ngura kudzivirira, uye nyatso kufukidza iko kugadzirwa uye kupora nzvimbo kudzivirira ngura.
Jekiseni Kuumbwa Nesimbi Inoisa, Tsika Mould, Plastic Kuisa richigadzirisa, Mould Factory, Mould Vagadziri, Prototype Mould Vagadziri,